Naya Post Nepal | भाग्य न्यौपाने लामो समय पछी युट्युवमा ल्याए यस्तो भिडियो-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
‘नमस्कार! म भाग्य न्यौपाने। आज तात्तातो खबर हेर्नुहुने दर्श कसामु फरक भिडियो लिएर आएको छु। हरेक दिन दुःखका भि डियो र विभिन्न ठाउँमा भएका विभिन्न पी’डाका भिडियोहरु प्र स्तुत गरिरहँदा देशमा भएको राम्रो काम पनि देखाउँ भनेर आज म यो भिडियो बनाउँदैछु। विशेषगरी संसारभर तात्तातो खबर हे र्नुहुने दर्शकहरुले आजको भिडियो हेर्नुहोला।
अनि, भिडियो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। कुनै समय यस्तै परिचयसहित युट्युबमा प्रस्तुत भएर एउटा तप्कामाझ निकै रुचा’इएका युट्युबर हुन्, भाग्य न्यौपाने। यही कारण उनले चलाएको युट्युब च्यानल ‘तात्तातो खबर’ले छोटो समयमा २० लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबर बनाएको छ।
तर, यति धेरै प्रशंसक कमाएको यो च्यानल हिजोआज मौन छ। ८ महिनायता यो च्यानलमा भाग्यले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेका छैनन् च्यानल ‘डिएक्टिभ’ नहोस् भनेर १२ दिनअघि रा खिएको ५० सेकेन्डको भिडियोबाहेक। कुनैबेला युट्युबबाट स र्वाधिक आम्दानी गर्ने नेपाली युट्युबरको परिचय बनाएका भा ग्य हिजोआज सोसल मिडियामा पनि ‘साइलेन्ट’ देखिन्छन्।
कुनै बेला भाग्यले अपलोड गरेको हरेक कन्टेन्टले युट्युबमा लाखौं भ्युज पाउँथ्यो। तर, केही महिनायता उनको कन्टेन्टमा ‘भ्युज’ कम, ‘गाली’ ज्यादा हुन थालेपछि उनको आम्दानी त घट्यो नै, त्यसपछि उनी सोसल मिडियाबाटै टाढिएका छन्।
आठ महिनाअघि उनको च्यानलमा अन्तिम भिडियो थियो, पाँच महिनाअघि अप्रिल २० मा अपलोड भएको अग्लो धरहराको। भि डियोको शीर्षक र थम्बनेल उनका पुराना भिडियोमा जस्तै अतिरन्जित र सनसनीखेज छैन, मात्रै लेखिएको छ, ‘अहिले धरहरा हेर्नुहोस्।’
भूकम्पले भत्किएपछि फेरि ठडिएको धरहराको कन्टेन्टलाई आफ्नो युट्युब यात्रा खस्किएका बेला भाग्यले जसरी अन्तिम भिडियोका रुपमा छाडे, यसलाई युट्युब वृत्तमा अर्थपूर्ण हिसा बले हेरिएको छ। लामो ‘ग्याप’पछि ११ दिनअघि भने भाग्यले एक जना सडकमा भेटिएका ‘मनोरोगी’लाई उद्धार गरेको भन्दै मोबाइलबाटै खि’चेर छोटो भिडियो राखेका छन्।
जसमा यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म २७ सयमात्रै भ्युज भएको छ। आफू चर्चामा आउन युट्युबलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा क सरी एउटा उदाएको युट्युबर पतन हुन्छ? भाग्य यतिखेर युट्युब वृत्तमा यसकै एउटा उदाहरण बन्न पुगेका छन्।
आँशु र पीडामिश्रित कन्टेन्ट बेचेर £~|चम्किरहेका बेला कसरी भाग्यको युट्युब यात्रा एकाएक ओर्लिन पुग्यो? यसमा उनकै के ही भिडियोहरु ‘दोषी’ छन्, जसले आम दर्शकमाझ भ्रम त सिर्जना गर्यो नै, सँगसँगै उनको गलत नियत पनि उदाङ्गो भ यो।
जब भाग्य आफैं ‘न्यायधिश’ बन्न खोजे…
शीर्षकः ‘बच्चा भेटिएको सबै नाटक रहेछ, भाग्य न्यौपाने पुगेर पर्दाफास
सन् २०२० अगस्ट ४ तारिखमा भाग्यको तात्तातो खबर युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको यो भिडियोलाई अहिलेसम्म १७ ला ख ९६ हजारभन्दा बढीले हेरेका छन्। १८ हजार बढीले कमेन्ट गरेका छन्, जसमा अधिकांशले भाग्यको कडा शब्दमा आलो चना गरेका छन्।
आफू चर्चामा आउन युट्युबलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा कसरी एउटा उदाएको युट्युबर पतन हुन्छ? भाग्य यतिखेर युट्युब वृत्त मा यसकै एउटा उदाहरण बन्न पुगेका छन्।
एक बालगृहकी सञ्चालक पुष्पा अधिकारीको घरमा पुगेर खि चिएको भिडियो थियो यो। भिडियो हेर्दा भाग्य ‘प्रस्तोता’ कम, ‘न्यायाधीश’ ज्यादा देखिन्छन्। शीर्षकमा राखिएको ‘पर्दाफास ’शब्दले नै थोरबहुत संकेत त गर्छ नै।
घरभित्र छिर्नेबित्तिकै भाग्यले सुरुमै पुष्पालाई रिसाएको भावमा भन्छन्, ‘दिदी, तपाईंसँग मचाहिँ १० हजार लिन आ’को,’ उनको पहिलो प्रश्न भनौं या आक्रोश, भिडियो हेर्दा पुष्पालाई उनले भ नेको पहिलो वाक्य यही नै हो। भाग्यले १० हजार माग्नुको कार ण बुझ्नचाहिँ ०७७ साउन १३ मा फर्कनुपर्छ।
त्यसदिन कार्टुनमा राखिएको एउटा बच्चाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। पुष्पाले उक्त बच्चा काठमा डौंस्थित कपनको चौरमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको बताए की हुन्छिन्। अनि, त्यसलाई भाग्यले आफ्नो युट्युबमार्फत विश्व भर फैलाएका हुन्छन्।
करिब २ साल पछी भाग्यले आफ्नो युट्युब च्यानल ताततातो खबर मार्फत आजदेखि सुरु भयो सबै रोकिएका काम अब सुरु गर्दैछौ हरेक दिन हेर्दै गर्नुहोला भन्दै एउटा स्टाटस् सहित भिडि यो अपलोड गरे हेरौ उनको उक्त भिडियो..
२०७९ बैशाख ९, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 333 Views